2 Jul 2018 . 4:44 PM
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ အောင်မြင်မှုအများဆုံး ဘရာဇီးလ်နဲ့ ကွန်ကာကပ်ဖ် ထိပ်သီး မက္ကဆီကိုအသင်းတို့ဟာ ဒီနေ့(တနင်္လာ) မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈း၃၀ အချိန်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားမှတ်တမ်းတွေ၊ နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ပွဲပယ်၊ ဒဏ်ရာအခြေအနေတွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ဆားဘီးယားနဲ့ပွဲတုန်းက ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်း အဓိက ဘယ်နောက်ခံလူ မာဆယ်လို Marcelo ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက အသင်းနဲ့အတူ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ဒီပွဲရဲ့လူစာရင်းမှာ ပါဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။ တခြားနောက်ခံလူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒန်နီလို Danilo ကလည်း ပေါင်ဒဏ်ရာကနေ သက်သာလာပြီဖြစ်ပေမယ့် ညာနောက်ခံလူနေရာမှာ ဖက်ဂ်နာ Fagner ပဲ ပွဲထွက်လာဖို့များနေတယ်။ မက္ကဆီကိုအသင်းမှာတော့ အားထားရတဲ့ နောက်ခံလူ ဟက်တာမော်ရီနို Hector Moreno နှစ်ဝါထိထားတာကြောင့် ပွဲပယ်ခံရမှာဖြစ်လို့ အခုပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘဲ သူ့နေရာမှာ ဟူဂိုအာယာလာ Hugo Ayala ပါဝင်ကစားဖို့ရှိနေပါတယ်။
– ဘရာဇီးလ်နဲ့မက္ကဆီကိုအသင်းတို့ဟာ ပွဲ(၄၀)ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ဘရာဇီးလ်က (၂၃)ပွဲနိုင်၊ (၇)ပွဲသရေ မက္ကဆီကိုက (၁၀)ပွဲနိုင်ခဲ့တယ်။
– မက္ကဆီကိုအသင်းဟာ ဘရာဇီးလ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် (၄)ကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး (၁)ပွဲသရေ၊ (၄)ပွဲရှုံးရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သလို အဲဒီ(၄)ပွဲစလုံး တစ်ဂိုးမှမသွင်းနိုင်ဘဲ ပေးဂိုး(၁၁)ဂိုးရှိခဲ့တယ်။
– ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဘရာဇီးလ်နဲ့ မက္ကဆီတို့ (၅)ကြိမ်မြောက်ဆုံတွေ့တာဖြစ်ပြီး ဘရာဇီးလ်-ဆွီဒင်(၇ကြိမ်)၊ အာဂျင်တီးနား-ဂျာမနီ(၇ကြိမ်)၊ ဂျာမနီ-ယူဂိုဆလားဗီးယား(၆ကြိမ်)တို့နောက်ပိုင်း အကြိမ်အများဆုံးဆုံတွေ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
– ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်က ထွက်ခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်း ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ပုံမှန်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
– ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘရာဇီးလ်အသင်း (၃)ပွဲဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဲဒီလို မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။
– ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာ ၂၀၁၇၊ ဇွန်လတုန်းက အာဂျင်တီးနားကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် နောက်ဆုံး(၁၄)ပွဲမှာ ရှုံးပွဲမရှိတော့ဘဲ (၁၀)ပွဲနိုင်၊ (၄)ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။
– မက္ကဆီကိုအသင်းအနေနဲ့ နောက်ဆုံးကမ္ဘာ့ဖလား(၆)ကြိမ်စလုံး ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်က ထွက်ခဲ့ရတယ်။
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံး ဘရာဇီးလျနဲ့ ကှနျကာကပျဖျ ထိပျသီး မက်ကဆီကိုအသငျးတို့ဟာ ဒီနေ့(တနင်ျလာ) မွနျမာစံတျောခြိနျ ည ၈း၃၀ အခြိနျမှာ ယှဉျပွိုငျကစားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားမှတျတမျးတှေ၊ နှဈသငျးစလုံးရဲ့ ပှဲပယျ၊ ဒဏျရာအခွအေနတှေကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ဆားဘီးယားနဲ့ပှဲတုနျးက ဒဏျရာရခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျး အဓိက ဘယျနောကျခံလူ မာဆယျလို Marcelo ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေတေု့နျးက အသငျးနဲ့အတူ လကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ ဒီပှဲရဲ့လူစာရငျးမှာ ပါဝငျလာဖို့ရှိပါတယျ။ တခွားနောကျခံလူတဈဦးဖွဈတဲ့ ဒနျနီလို Danilo ကလညျး ပေါငျဒဏျရာကနေ သကျသာလာပွီဖွဈပမေယျ့ ညာနောကျခံလူနရောမှာ ဖကျဂျနာ Fagner ပဲ ပှဲထှကျလာဖို့မြားနတေယျ။ မက်ကဆီကိုအသငျးမှာတော့ အားထားရတဲ့ နောကျခံလူ ဟကျတာမျောရီနို Hector Moreno နှဈဝါထိထားတာကွောငျ့ ပှဲပယျခံရမှာဖွဈလို့ အခုပှဲမှာ ပါဝငျနိုငျမှာ မဟုတျဘဲ သူ့နရောမှာ ဟူဂိုအာယာလာ Hugo Ayala ပါဝငျကစားဖို့ရှိနပေါတယျ။
– ဘရာဇီးလျနဲ့မက်ကဆီကိုအသငျးတို့ဟာ ပှဲ(၄၀)ဆုံတှခေဲ့ပွီး ဘရာဇီးလျက (၂၃)ပှဲနိုငျ၊ (၇)ပှဲသရေ မက်ကဆီကိုက (၁၀)ပှဲနိုငျခဲ့တယျ။
– မက်ကဆီကိုအသငျးဟာ ဘရာဇီးလျနဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ (၄)ကွိမျဆုံတှခေဲ့ပွီး (၁)ပှဲသရေ၊ (၄)ပှဲရှုံးရလဒျထှကျပျေါခဲ့သလို အဲဒီ(၄)ပှဲစလုံး တဈဂိုးမှမသှငျးနိုငျဘဲ ပေးဂိုး(၁၁)ဂိုးရှိခဲ့တယျ။
– ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဘရာဇီးလျနဲ့ မက်ကဆီတို့ (၅)ကွိမျမွောကျဆုံတှတေ့ာဖွဈပွီး ဘရာဇီးလျ-ဆှီဒငျ(၇ကွိမျ)၊ အာဂငျြတီးနား-ဂြာမနီ(၇ကွိမျ)၊ ဂြာမနီ-ယူဂိုဆလားဗီးယား(၆ကွိမျ)တို့နောကျပိုငျး အကွိမျအမြားဆုံးဆုံတှတေ့ာလညျးဖွဈပါတယျ။
– ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့က ထှကျခဲ့ရတဲ့နောကျပိုငျး ဘရာဇီးလျအသငျးဟာ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ကို ပုံမှနျတကျရောကျနိုငျခဲ့တယျ။
– ၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဘရာဇီးလျအသငျး (၃)ပှဲဆကျနိုငျခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး အဲဒီလို မစှမျးဆောငျနိုငျတော့ပါဘူး။
– ဘရာဇီးလျအသငျးဟာ ၂၀၁၇၊ ဇှနျလတုနျးက အာဂငျြတီးနားကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျ နောကျဆုံး(၁၄)ပှဲမှာ ရှုံးပှဲမရှိတော့ဘဲ (၁၀)ပှဲနိုငျ၊ (၄)ပှဲသရကေခြဲ့တယျ။
– မက်ကဆီကိုအသငျးအနနေဲ့ နောကျဆုံးကမ်ဘာ့ဖလား(၆)ကွိမျစလုံး ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့က ထှကျခဲ့ရတယျ။